သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): ဘကုန်းရွာမှ ဖဦးထုပ်ချစ်သူများ
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 02:28
တွားမယ်။ ကျလိ ကျလိ။
ခ် ခ် ခ်"
သူကြီးမင်း ဘယ်သူ့ကိုစောင်းမြောင်းပြောနေတာ
( တော်ပါသေး ဂျစ်တူး အသုံးအနှုံးကလေး
သူကြီး မသိလို့ လွတ်သွားတယ် )
Saturday, 8 February 2014 at 03:07:00 GMT
ဘကုန်းမဟုတ် ဖဦးထုပ် မဟုတ်တဲ့ စာဖတ်သူအဖြစ်လာရောက်သွားပါကြောင်း....း))
Saturday, 8 February 2014 at 03:40:00 GMT
များမကြာမီ မောင်ကာဠုတို့လည်း ဘကုန်းရွာထဲကို ပြန်ရွှေ့ခဲ့ပါတော့မယ် သူကြီးမင်းရယ်...
အနှီလိုမှ မရွှေ့ခဲ့ရင် နောက်တစ်ပုဒ်ထပ်တက်လာဦးမှာ မြင်ယောင်သေး...း)
Saturday, 8 February 2014 at 10:30:00 GMT
မောင်ဂျစ်တူးရေ.. စောင်းမပြောပါဘူး။ တည့်တည့်ပြောကြည့်လိုက်တာလေ။ ရာထူးလေးတော့ မပြုတ်လောက်ဘူးထင်ပါရဲ့။ ဘကုန်းရွာထဲ ဖဦးထုပ်ရွာထဲ ပတ်ပြီး ပါးရိုက်ပစ်လိုက်မယ်လို့ မပြောလိုက်မိဘူးထင်သား။
အင်း.. ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော ကူးကူးလှိုင်လေးကတော့ ပန်းပန်လျှက်ပါဘဲ။ ကျေးဇူးတင်ထှာ။ တကယ်။
မကြာမီလာမည် မျှော် ဆိုပေမဲ့.. ဘိလပ်က ၀ိတ် အေ မိနစ် ဆိုထာထက် ပိုများ ကြာလေဦးမလား မသိတော့ချေ။ ဟာ ဟ။
Saturday, 8 February 2014 at 12:45:00 GMT
သူများလဲ ဘကုန်းချစ်သူပါပဲနော် …
မြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ ကွန်နက်ရှင်ကြောင့် ဖဦးထုပ်ကို မချစ်သော်လဲ အောင့်ကာနမ်းနေရတဲ့ ဘွပါ … ခ်ခ် :D
Saturday, 8 February 2014 at 13:20:00 GMT
တဂျီးမင်း..သူများက ဘကုန်းရော၊ ဖဦးထုပ် ချစ်သူ..မအားလို့ မဂင်းနိုင်တဲ့ ဘွလေးပါ..ခ်ခ်...;)
Saturday, 8 February 2014 at 15:27:00 GMT
ဘာကြောနေပါလိမ့်ပေါ့.. သိတွားပြီး တဂျီးမင်း..
ဒီက ဘကုန်းရွာလေးကို ချစ်နေစဲပါ တဂျီးမင်းရဲ့
Saturday, 8 February 2014 at 16:28:00 GMT
မီးကတော့ ခုထိ ဘကုန်းရွာကို သစ္စာရှိဆဲပါပဲ ခိခိ... ၀လုံးရွာကိုသိတယ် ပစောက်ရွာက ဘာကြီးတုန်း (ပိန်းတိန်းတိန်းသကြားလုံး အမေး >.<) ဟိုတလောက ဖဦးထုပ်ရွာကို မကြာခင်ဖျက်သိမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်း ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ကောလဟာလလား တကယ်လားတော့ မပြောတတ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ အားလုံး ဘကုန်းရွာလေးဆီပြန်လည် ချီတက်လာကြမှာတော့ မြင်ယောင်ပါသေးတယ် တဂျင်းမီးရေ ^_^
Sunday,9February 2014 at 01:13:00 GMT
အဲ... ခက်ဆစ်ရေးပေးထားသား... သေးသေးလေး ရေးထားတော့ ဘယ်မြင်မတုန်းလို့ :P
Sunday,9February 2014 at 01:15:00 GMT
သူငယ်ချင်းများရာ ဖဦးထုပ် ရပ်ကွက်ထဲသွားရင်း အားလုံး စုပ်စုပ်မြှုပ်။ နဲနဲမှ မလှုပ်။ အနည်းငယ်မျှပင် ပြန်မတက်လာနိုင်တော့ပေ :D
Sunday,9February 2014 at 07:33:00 GMT
တီလေးလည်း ဘကုန်းမဟုတ် ဖမဟုတ် စာဖတ်ပရိတ်သတ် တစ်ဦးဖြစ်ပါကြောင်း တဂျီးမင်း အားပေးလျှက်ပါ။
Sunday,9February 2014 at 07:45:00 GMT
အကြာကြီး ပြုံးသွားတယ်ဗျာ ရင်ထဲပေါ့ပေါ့ပါးပါး
ကျနော်တို့ ကတော့ ဘကုန်းသမားကနေ ဖဦးထုပ် သမား ပြောင်းလု ပြောင်းဆဲ ပြောင်းလတ္တံ ထင်ပါရဲ့ 
Sunday,9February 2014 at 13:39:00 GMT
make me smile this post. yannnnnn kyitesssss!
but i dont know wa and pa. what are they??????
Monday, 10 February 2014 at 12:47:00 GMT
မမေ့ပါဘူး တဂျီးရေ .အချိန်ရရင် နေတိုင်း ကိုယ့်အိမ်ကို
Tuesday, 11 February 2014 at 05:35:00 GMT
တွေးတွေးပြီး ပြုံး... နောက်ဆုံးရောက်တော့မှ ဝါးလုံးကွဲ ရယ်ရပါလား ...အကိုရေ .. "ဘကုန်း" ရွာသူလေး ပါ လို့.. :)
Tuesday, 11 February 2014 at 16:58:00 GMT
ဟိုတုန်းက ဘယ်သူမှ မမုန်းခဲ့ကြတဲ့ ဘကုန်းရပ်ကွက်မှာတော့ ဘဘုန်းတို့သာ ရှိလေတော့ယောင်တကား... ဒါပေမဲ့ ခြောက်ကပ်နေတဲ့ ဘကုန်းရွာလေးကိုတော့ ပြန်စည်ကားလာတာကို မြင်ချင်မိပါရဲ့...
လုပ်ပါအုံး... Tag post တစ်ခုလောက်... ဘဘုန်းတို့ရွာကို ပြန်လည်စည်ကားလာအောင်... :D :D :D
Wednesday, 12 February 2014 at 01:03:00 GMT
ဖဦးထုပ်ရဲ့ ဝေါဟာရဋီကာများကို အသံထွက်ဖတ်ရင်း ရယ်မောမိပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာတော့ လက်မရဲသေးလို့ မသုံးဖူးသေးဘူး သူကြီးမင်းရေ။ မြတ်လည်း အရင်က ဖဦးထုပ် မသုံးဖြစ်ပေမယ့် အခုတော့ ဖဦးထုပ်မှာ ခြေတစ်ဖက်၊ ဘကုန်းမှာ ခြေတစ်ဖက် နဲ့ လှေနံနှစ်ဖက်နင်းနေမိတယ်။ :D
Thursday, 13 February 2014 at 16:18:00 GMT
တကယ်တော့ ဖဦးထုပ်ချစ်သူများရဲ့ ရင်ထဲမှာ အသစ်တွေဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း ဘကုန်းရွာလေး ရှင်သန်နေဆဲပါ တဂျီးမင်းရေ.....
တီတင့်လဲ တီတင့်ချစ်တဲ့ ဘကုန်းရွာကိုပဲပြန်တော့မယ် :)
မသက်ပြောသလို တဂ်ပို့စ်တစ်ခုလောက်နဲ့ ဘကုန်းရွာလေးကို ပြန်စည်ကားလာစေချင်တယ်။
Sunday, 16 February 2014 at 13:17:00 GMT
မြဘူး မြဘူး။ ဖအုပ်ထုတ်မှ ဖအုပ်ထုတ်ပဲ... :)
သဂျီးမင်းရယ်.. ငယ်ချစ်ဟောင်းကို သေတောင်မမေ့ပါဘူးဆို...
ပြောရတာ မောထှာ... ကျန်း... :P
Monday, 17 February 2014 at 03:29:00 GMT
ကျွန်တော်လည်း ဖဦးထုပ်မှာ Blogger တွေ ရောက်နေတယ်ဆိုလို့ သွားရှာရင်းနဲပ ဖဦးထုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ...
Monday, 17 February 2014 at 04:15:00 GMT
Monday, 17 February 2014 at 04:35:00 GMT
ကျန်းကျန်း ဒဂျီးမင်းရေးတတ်ပ ကွကိုဆို ဒီလိုမရေးတတ်ဘူး ဘကုန်းရွာသားဘဝမေ့မရပါဘူး ဖဦးထုတ်က ဖလမ်းဖလမ်းလေးတွေ ကြောင့်မခွဲနိုင်ဖစ်နေတာ ဒချိ ဒချိ
Monday, 17 February 2014 at 04:38:00 GMT
ဘကုန်းရွာလေးကို ပျော်မွေ့ ဘကုန်းရွာလေးမှာပဲ နေချင်ပါတယ်..
ဘကုန်းရွာက စည်စည်ကားကားလေးကိုလည်း အမြဲသတိရမိပါရဲ့ ...
Monday, 17 February 2014 at 04:47:00 GMT
ပကတိရိုးစင်းတဲ့ ဘကုန်းရွာလေးကိုပဲ ဖက်တွယ်မိတယ်၊ တခါတလေ ရွာလေးကနေ ပျောက်ကွယ်မိတာလေးပဲ ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်လဲ ဒီ ဘကုန်းရွာလေးကို မပစ်ပယ်နိုင်ဘူး၊ မစွန့်ခွာနိုင်ဘူး..ရစ်သီရစ်သီနဲ့ ပြန်ပြန် ခြေလှည့်လာမိတာပဲ၊
(လင့်ခ်လေးလဲ ယူသွားပါတယ် သူကြီး) :)
Monday, 17 February 2014 at 05:04:00 GMT
ပျော်ရာမှာနေကြတာက သဘာဝ ဖြစ်နေတာကိုးနော်
Monday, 17 February 2014 at 05:20:00 GMT
ဟီး ဟီး ...
ဘကုန်းနဲ့ ဖဦးထုပ်ဆိုတော့ ဘင်္ဂလားနဲ့ ဖိလစ်ပိုင်လို့ ယောင်ရမ်းတွေးလိုက်မိသေးတယ်။
ကြယ်ပြာလဲ ဖဦးထုပ်ရွာကိုရောက်နေတာကြာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဘဂုန်းရွာမှာတော့ မကြာ မကြာ ကဗျာလေးတွေ တင်ဖြစ်ပါတယ်။
Monday, 17 February 2014 at 07:08:00 GMT
တစ်နှစ်လောက်ခွဲခဲ့ပြီးမှ ပြန်ရေးနေတာ တစ်လကျော်လောက်ရှိပြီ။ ဘယ်လို အခက်အခဲရှိရှိ၊ သံယောဇဉ်မှ မပြတ်နိုင်တာ။
Monday, 17 February 2014 at 13:14:00 GMT
ဘကုန်းချစ်သူဆိုပြီး ဖဦးထုပ်ရွာထဲ ပုန်းနေတာများ။ ကွန်ကို လွဲချနေသေးတယ်။
လှေနံနှစ်ဘက် နင်းတယ်ပေါ့။း)
ချစ်နေဆဲဆိုရင် ခဏခဏ လာနော်။
ပိစိ ဘကုန်းချစ်မှန်းသိပါတယ်။ ဆက်ပြီး ချစ်နော်။း)
လသာညဖြစ်ပါတယ် ဆိုတာလေး မတွေ့ရတာ ကြာပြီနော်။
တီလေးမေခင် ဆက်ဆက်အားပေးနော်။ ဟဲ ဟဲ မဲဆွယ်ထားတာ။
ဖဦးထုပ်ပြောင်းရင်လဲ ဘကုန်းကိုတော့ မမေ့နဲ့ဦးပေ့ါဗျာ နော့။း)
ပြုံးရတယ်ဆိုလို့ ပျော်ပါတယ်။ ခက်ဆစ်က အောက်မှာ သေးသေးလေး ရေးထားပြီးသားပါ။
အိမ်ကို ပြေးကြည့်ရုံဘဲလား။ အမောင်ဒွတ်တိယ။ ဂရုတော့ မစိုက်ဘဲနဲ့။း)
ဘကုန်းရွာသူလေးပါဆိုပြီး ဖဦးထုပ်ထဲ ရောက်နေတာများ မသိရင်ခက်မယ် အိမ်ကျယ်.. အဲ အိန်ကျယ်...
ဘကုန်းရွာလေး စည်ကားလာအောင်တော့ မသက်ဝေတို့ကိုဘဲ အားကိုးရမှာလေ။ လုပ်ပါဦး။း)
လှေနံနှစ်ဖက်နင်းနေရင် သတိထားနော်။ တော်ကြာ ဖဦးထုပ်ဖက် လုံးလုံး ရောက်သွားဦးမယ်။း)
တီတင့် လုပ်လိုက်တာ လူအတော် စည်သွားတယ်။ ကျေးဇူးဘဲ တီတင့်ရေ။ တီတင့်က လူချစ်လူခင်များတယ်ဆိုတော့ ဘကုန်းရွာစည်ကားရေးအတွက် တီတင့်ကိုဘဲ အားကိုးရတော့မှာ။ အားထုတ်ဦးနော် တီတင့်။
ခွိခွိ။ အမမြသွေးလဲ ရယ်ရတယ်။ ဝေါဟာရတွေ ကြွယ်နေပြီ။
ကာဠုဒါယီလို ဖြစ်သွားတာထင်ပါရဲ့။ ဖဦးထုပ်က ဆွဲအားကောင်းတယ်လေ။
အမှန်တရားအတွက် ပြန်လာပါ။း)
ဟဲ ဟဲ။ ဒချိ ဒချိတွေ ဖလမ်းဖလမ်းတွေ မေ့ထားခဲ့တယ်။း)
ဘကုန်းရွာလေးမှာ ဆုံကြရအောင် အပြေးလေးလာခဲ့နော် ညီမ။
ဘကုန်းရွာလေးက သာသာယာယာ ချစ်စရာလေးပါ ထရီဆာရေ။ လင့်ခ်ယူသွားတယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးနော်။ သူကြီးမင်းလဲ လိုက်လာခဲ့မယ်။
လာအားပေးလို့ ကျေးဇူးနော်။ ထပ်ပြီးလဲ မျက်စိလည်တဲ့အခါ ၀င်ခဲ့ပါဦး။
ဒီဘကုန်းနဲ့ဖဦးထုပ်က တစ်မျိုးလေ ညီမရဲ့။ အားရင် ကဗျာလေးတွေ စာလေးတွေ ထပ်တင်ဦးနော်။
သံယောဇဉ်တွေလေ အမ။ သူကြီးလဲ ဒီလို သူ့ကို မပြတ်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတာ။
Monday, 17 February 2014 at 16:37:00 GMT
ကျွန်တော့်ချဉ်ပေါင်ခင်းလေး မြက်ရှင်းတော့မယ်ဗျား)
Wednesday,5March 2014 at 07:01:00 GMT